သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း| January 5, 2013 | Hits:8,229
12 | | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ခရိုင် သာပေါင်းမြို့နယ် လှေကြီးတက် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် စက္ကူနှင့် ပျော့ဖတ် စက်ရုံကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရနှင့် KNPP အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုး
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shwe Yoe January 5, 2013 - 11:02 am	What did Maung Aye know about Paper Mills? Inspection byageneral who knew nothing about business? Oh! This is the Burmese way. Thein Sein knows nothing about runninganation too. That’s why the Union is going nowhere.